Blinken: iri nyore vhidhiyo mutambo wekuvandudza yako ndangariro | Linux Vakapindwa muropa
Bhenekera ndeimwe yemitambo yemavhidhiyo inogona kubatsira avo vanhu vane matambudziko ekurangarira. Uye zvakare, kuita urwu rudzi rwekurovedza muviri kunogona kubatsira kudzivirira kana kunonoka kuora mwoyo kana zvimwe zvirwere zveeurodegenerative senge Alzheimer's. Kunyangwe iwe usina matambudziko ekurangarira, ichiri varaidzo kune vamwe vanhu ...
Bhenekera yakavakirwa pane inozivikanwa mutambo wemagetsi vhidhiyo yakaburitswa muna 1978, saSimoni ane mukurumbira. Mariri, vashandisi vanopokana kuti varangarire kutevedzana kwemavara ari kuitika pachiratidziri. Inotanga nekuteedzana kuri nyore uye inozoenderera ichiwedzera kuomarara zvekuti zviri kuramba zvichinetsa kuona marongero emabhatani mana akasiyana akange akabatidzwa.
Kune izvo, ivo vanotanga kuvhenekera mabhatani ane mavara akateedzana random. Mushandisi anofanira kucherechedza uye ozodzokorora kuteedzana kwakafanana kwemwenje nenzira kwayo. Kana mutambi akabudirira pakurangarira kutevedzana, vanobva vaenda kune inotevera, iyo ichave yakafanana, asi iine rimwe danho, zvichingodaro kusvika nhevedzano yacho yawedzera kuoma.
Kana ikasabudirira, mutambi anorasikirwa uye anofanira kutanga nekuteedzana kwekutanga. Nenzira iyoyo chinangwa ndechekuvandudza ndangariro yako nemuyedzo wega wega uye uwane iwo akawanda mapoinzi ari nani (kana kuyera ndangariro dzako nemumwe munhu, kuti uone kuti ndiani anowana zvibodzwa zvirinani). Iwo akanyanya mamaki ari kurangarira kuteedzana kwemwenje sere, iine akakwirira emapoinzi masere, imwe yeimwe nateedzana yakabudirira.
Zvakanaka, kana iwe uchifarira mutambo uyu, unogona kuuwana mune akawanda zororo kana muzvitoro zveapp ma distros. Chii chimwe, icho chikamu che KDE, saka kana iwe uchida rumwe ruzivo nezvazvo, unogona shanyira webhu ino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Blinken: iri nyore vhidhiyo mutambo kuti uvandudze ndangariro yako